कोरोना देखाएर कांग्रेसभित्र ‘हानिकारक’ हर्कत, डा. शेखरको अडानले बुढानिलकण्ठमा हंगामा – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कोरोना देखाएर कांग्रेसभित्र ‘हानिकारक’ हर्कत, डा. शेखरको अडानले बुढानिलकण्ठमा हंगामा
कोइरालाले लेखेका छन्, ‘कोरोना भाइरसका सन्त्रासको कारण नेपाल प्रेस युनियनको आसन्न महाधिवेशन रोकिने हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । यस्ता विपत्ति समयसमयमा आई नै रहन्छन् । यी कुराको आधारमा पार्टी र यस मातहतका संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु संगठनकै लागि हानिकारक हो । हामी परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्केर व्यावहारिक र वैज्ञानिक बाटोतर्फ जानुपर्छ ।
बार एसोसिएसन, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र चिकित्सक संघले अपनाएको जिल्ला–जिल्लाबाटै मतदान गर्ने विधि अपनाएर प्रेस युनियनको महाधिवेशन गरिनुपर्छ । यसले आर्थिक बोझ कम हुन्छ, जिल्लाका साथीहरूलाई महाधिवेशन स्थलसम्म जानुपर्दैन र पारदर्शी तथा निष्पक्ष पनि हुन्छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि सातौं महाधिवेशनसम्म यही प्रक्रिया अपनाएको थियो भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । समय र परिस्थिति अनुसार हामीले आफू र सांगठनिक संरचनालाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ ।’